जंगल मासेर लन्डन र हङकङको भन्दा ठूलो एयरपोर्ट निजगढमा किन? - Yatra Daily
Home Uncategorized जंगल मासेर लन्डन र हङकङको भन्दा ठूलो एयरपोर्ट निजगढमा किन?
सरकारले अहिले सहर बनाउने भनेको छैन। आठ हजार हेक्टर जमिन एयरपोर्ट आयोजनाका लागि चार किल्ला तोकेर राजपत्रमै प्रकाशित गरेपछि यो सम्भावना खुल्लै भने रहन्छ। – अमित ढकाल सेतो पाटीबाट
Previous articleकामना फिल्म आवार्डमा निर्देशक पुर्णेन्दु झाको संरक्षण ७ विधामा मनोनित
Next article‘मधेस कुनै पनि बेला विस्फोट हुनसक्छ’